Na ọkachamara elu-arụmọrụ ọrụ na zuru okè ike mgbake ventilashion usoro ngwọta, HOLTOP merie ndị bidding n'etiti the20 bidding ụlọ ọrụ maka ume mgbake ventilashion usoro Wantou World Ụlọ Project na Hefei, Anhui Province.With ọma technical uru, HOLTOP ọma bịanyere aka karịa 2,000 tent nke ume mgbake ventilashion usoro maka oru ngo ike green, ọgụgụ isi, ike na elu ikuku quality ndụ na gburugburu ebe obibi.
Wantou World Building bụ alow-njupụta quality obodo wuru site Wantou Investment na Construction Company. Mkpokọta ewu ebe bụ banyere 350,000 square mita.
Mgbe na-anata oku maka bidding, HOLTOP mụụrụ a nọmba nke nnyocha na analysis na gburugburu ebe obibi, akụkụ okuku ume na nkasi obi, na onye ọrụ ahụmahụ, wdg Dabere na isi ọhụrụ ikuku usoro, Holtop chọrọ iji elu arụmọrụ ike mgbake ventilashion usoro na PM2.5 nyo na ọgụgụ isi na-achịkwa. Ọ bụ ezie na mbụ ego ga-amụba, na ike ga-azọpụta arụ ọrụ kwa ụbọchị na ime ụlọ ikuku quality ga-nọ na praịm larịị ike ike ịzọpụta na ike ndụ ọnọdụ.
Dị ka na-amụba ekesidiade elu ime ụlọ àgwà na ụlọ na-wuru uko, ike mgbake ventilator ga-arụnyere na ụlọ ike ike ịzọpụta na ike ndụ na gburugburu ebe obibi. N'ihi na ihe ọkachamara amụma n'ihi na gị ụlọ, biko kpọtụrụ anyị na ahịa otu.
Post oge: Oct-22-2018